बिरालो स्क्र्याचर, बिरालो रूख स्क्र्याचर, बिरालो खेलौना - जी फेen
हांग्जो जी फेen फूर्ज प्रोडक्ट कं, लिमिटेड चीनमा पाल्तु जनावर उत्पादनहरूको एक पेशेवर निर्माता हो र ह Hang्जाउ सिटीको पिंग्याओ टाउनमा अवस्थित छ। कारखाना २०० 2008 मा शुरू भएको थियो र हामीसँग पालतू पशु उद्योगमा धेरै अनुभव छ। के हामी अब पछ्याउँछौं उत्पादनका लागि अनौंठो डिजाइन र उत्तम क्वान्लिटी हो।
गत्ता बिराला घर
यस वस्तुसँग हामीसँग आफ्नो पेटन्ट छ। यो पर्यावरण-मैत्री नालीदार कागजबाट बनेको छ र हामी दुइटै वस्तुको माथि र तल स्क्र्याचि pad प्याडहरू राख्छौं। गत्ताको अनौंठो गन्धले बिरालाहरूलाई धेरै खुशीसाथ खेल्न आकर्षित गर्दछ। उत्पादन साना यातायात भोल्यूमको साथ असेंब्ली संरचनामा छ र ग्राहकको लागि यातायात लागत बचाउन सक्छ। अधिक के हो, यसले असेंबलि when समाप्त गर्दा ग्राहकको उपलब्धीको अनुभूति ल्याउँदछ।
पोस्ट बिरालो स्क्रैचर
यी आईटमहरूसँग हामीसँग आफ्नो पेटन्ट छ। यो इको-मैत्री E1 स्तर MDF बाट बनेको छ। हामीले २०१ design को अन्त्यमा यस डिजाइनलाई बनायौं र यसले पाल्तु जनावरको प्रदर्शनीमा ठूलो ध्यान दिन्छ। यो २०२० मा एकदम राम्रो बिक्री भइरहेको छ। हामीले ग्राहकलाई छनौट गर्न विभिन्न आकार र धेरै र made्गहरू बनायौं, पनि, नालीदार गत्ता बदल्न योग्य छ। स्क्र्याचरको साथसाथै हामी बिरालाहरूको रमाइलो बढाउन माउस खेलौना थप्दछौं। यदि तपाईं यी श्रृंखलाहरूमा रूचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तपाईंको लागि अनुकूलन डिजाइन गर्न सक्दछौं!
MDF बिरालो खेलौना
यस वस्तुसँग हामीसँग आफ्नो पेटन्ट छ। यो इको-मैत्री उच्च गुणवत्ता E1 स्तर MDF बाट बनेको छ। हामी बल र कोरुगेट कार्डबोर्ड सँगै मिलाउँछौं। बिरालोले स्क्र्याच गर्न र बल पनि खेल्न सक्छ। कागज स्क्र्याचर खेलौनाको तुलनामा, हामी यी शृ .्खलाका अधिक आकारहरू बनायौं। यी सूचीबद्ध तीन आकार बाहेक, हामीसँग अन्य धेरै आकारहरू छन्। के अधिक छ, बीचमा स्क्र्याचर प्याड बदल्न योग्य छ जसको मतलब यो वस्तु टिकाऊ हो। ग्राहकले केवल बीचको भाग बदल्न आवश्यक छ जुन सस्तो र ह्यान्डल गर्न सजिलो छ। यदि यो ...
सरीसृप पिंजरा एक प्रकारको मन्त्रिपरिषद् हो जुन उभयचरहरूलाई माथि उठाउन प्रयोग गरिन्छ। ग्राहकहरू उनीहरूको आफ्नो प्राथमिकता अनुसार क्याबिनेटहरू सजाउन सक्छन्, र बत्तीहरू र बिरुवाहरू स्थापना गर्न सक्छन् तिनीहरूको घरपालुवा जनावरलाई उत्तम आराम दिन। हामी वातावरण मैत्री बोर्डहरु प्रयोग गर्छौं र हाम्रो ग्राहकहरु को लागी बिभिन्न आकारहरु लाई अनुकूलित गर्न सक्छौं। हामीले सरीसृपको केजलाई युरोप र अमेरिका, अष्ट्रेलियामा निर्यात गरेका थियौं र यो सबै समयमा राम्रोसँग बिक्री हुन्छ। तपाईको छानबिनलाई स्वागत छ।
बिरालो पर्खाल शेल्फ SCW08-S
यो इको-मैत्री E1 स्तर MDF बाट बनेको छ। हामीले डिजाइन बनायौं र वेबसाइटमा धेरै जिज्ञासाहरू प्राप्त गर्‍यौं। बिरालो पर्खाल शेल्फ एक किसिमको फेसनल पाल्तु वस्तु हो, जसले बिरालालाई खेल ठाउँ दिन सक्छ। बहु-तह मोडेलि the बिरालोको चढाई प्रकृतिको लागि अधिक उपयुक्त छ। हेम्प डोरी स्तम्भले बिरालोलाई यसको पञ्जा खरोंच गर्न दिन सक्छ। डिजाइन विशेष र सस्तो छ। यो धेरै ग्राहकहरु द्वारा समर्थित र माया गरिएको छ।
ठेगाना:२--4 याangचेng्ग रोड,
पिंग्याओ टाउन, युहांग जिल्ला, ह Hang्जोउ
फोन:86-187 5823 6742 / 86-178 2683 3264